Maxaa laga bartay kulankii Newcastle United iyo Manchester United?Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Maxaa laga bartay kulankii Newcastle United iyo Manchester United?Sawiro
(11-2-2018) Kadib kulankii Guuldarada ay kala kulantay Manchester United kooxda Newcastle United ayaa waxaa lasoo saaray waxyaabihii laga bartay Cayaartaas ee ahaa wixii ugu xiisah badnaa.
Hadaba Maxaa ugu xiiso badnaa oo aan ka baranay kulankii Newcastle United iyo Manchester United?
1 Macalin Jose Mourinho ayaan weligiis Guul ku gaaarin Garoonka St James’ Park Cayaar Premier League ah waxaana ay tii Maanta ka mid ahayd Guuldarooyinka uu Caadeystey ee Garoonkaas 7 Mar oo uu Garoonkaas ku Cayaaray Mourinho weligii kuma badin 3 Bareejo ayuu ku galay 4 na waa looga badiyey.
2 Benitez ayaa Jose Mourinho ka badiyey Markii 6 aad waana Macalinka labaad ee uu kala kulmay Guuldarooyinka ugu badan kaliya waxaa ka sareeya Pep Guardiola oo Mourinho ka badiyey 9 Mar.
3 Newcastle United ayaa Markii koowaad Guul ku gaartay Garoonkeeda 9 Kulan oo ay ku dheeleen 3 bareejo ayey ku galeen 5 na waa lagu Garaacay waxaana Guul ay ku Gaaraan ugu danbeysey kulan ay ka badiyeen Crystal Palace bishii October.ee Sanadkii tegay.
4 Manchester United ayaa laga badiyey kulankii 5 aad ee Horyaalka Premier League ah Xiligaan waxayna lasinmeen dhamaan intii laga badiyey Xiligii la soo dhaafay.
5 Cayaaryahan Ritchie ayaa soo afjaray 49 Shuut oo uu Sameeyey Xiligaan oo uusan marna Gool ku dhalin waxaana uu ahaa Xiddigii dhaliyey Goolka qura ee looga badiyey Manchester United.
6 Cayaaryahan Gayle ayaa ku lug yeeshay 2 Gool oo Newcastle United ka dhalisey Manchester United kii Old Trafford isagaa dhaliyey kii ay hada kaga badiyeena isaga ayaa ku dhiibay.
7 Red Devils ayaa badisay 1 kulan oo kaliya 9 Cayaarood oo Gool lagala hor maray Xiligaan Horyaalka Premier League 3 bareejo ayey gashay 5 Na waa lagaraacay Newcastle United ayaana ahayd kooxda kaliya ee inta Gool kala hormartay ay ka badiyeen bishii November.ee Sanadkii 2017 4-1 ayeyna kaga badiyeen.
8 Sadex Cayaaryahan oo Manchester United ah ayaa Xiligaan Jaale lagu siiyey markii ay been dhulka isugu tuureen kuwaas oo kala ah (Valencia, Herrera, Smalling), Waxaana lamid ah Bournemouth.oo sidoo kale sadex Xiddig Jaale lagu siiyey istuuritaan.